कस्टम फिनिश उपचार सेवा सेवा र निर्माणकर्ता | हेन्गली मेटल प्रोसेसिंग
हाम्रो चित्रकला कार्यहरू प्रमाणित आईएसओ 9001: २०१ Quality गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित छन्। हामी सबैभन्दा अप टु डेट सेमी स्वचालित गीला चित्रकला सेवा प्रस्ताव गर्दछौं, जसमा अनलाइन रासायनिक ईचिंग सुविधा, ड्राई अफ सुविधा, आधुनिक इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रे बूथ र सुपर आकारको औद्योगिक ओभन सामेल छ। सामान्यतया हामी निम्न प्रकारका सामानहरू रंग्छौं: औद्योगिक मेसिनरी पार्ट्स, कृषि मेशिनरी पार्ट्स, निर्माण मेसिनरी पार्ट्स र अन्य।
हाम्रो गीला चित्रकला विशेषज्ञहरु तपाइँको सबै मेटल फिनिशिंग आवश्यकताहरुका लागि गुणस्तरीय, सस्तो पाउडर कोटिंग वितरण गर्नेछन्! हे Hen्गली चित्रकला कार्यशालामा हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रा साझेदारहरूलाई एक सुसंगत, उच्च-गुणवत्ताको, भिजेको पेन्टि service सेवा प्रदान गर्ने हो। हाम्रो विशेषज्ञता धेरै अनुप्रयोगहरु को लागी विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरु को कोटिंग को अठार वर्ष देखि छ। यस समयमा हामीले आधुनिक गीला चित्रकला टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभवको सम्मानजनक धन जम्मा गरेका छौं। हामी बुझ्छौं कि प्रत्येक निर्दिष्ट कोटिंग अनुप्रयोगले चुनौतिको एक अद्वितीय सेट खडा गर्न सक्छ। यो अनुभव र ज्ञानले हामीलाई धेरै विभिन्न आवश्यकताहरू भएका ग्राहकहरूलाई अत्यधिक लचिलो, लागत-प्रभावी सेवा प्रस्ताव गर्न सक्षम गर्दछ।
हाम्रो QC ध्यानपूर्वक वितरणको अघि तपाइँको अंशहरूको प्रत्येक इन्च निरीक्षण गर्दछ। उठाइएको हो, वा तपाईंलाई डेलिभर गरिएको छ, तपाईंको अंशहरू कुनै पनि क्षतिविना प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ!
हेन्गलीका अनुभवी चित्रकारहरूले एक शानदार समाप्त उत्पादको ग्यारेन्टी गर्छन्। सतह तयारी र इन-हाउस स्यान्डब्लास्टि From देखि विशेषज्ञताका साथ लागू, सुपर टिकाऊ, वातावरण मैत्री, सजावटी समाप्त! हाम्रो बेकि process प्रक्रियाले गीला चित्रकला प्रक्रियाको उपयोगमा रन, ड्रिप्स वा स्यागहरू दिने आश्वासन दिन्छ।
यसका साथै एचडीजी, जस्ता प्लेटि an, एनोडाइजिंग, पावर कोटिंग, जिंक-प्लेटेड, क्रोम कोटेड, निकल प्लेट गरिएको आदि पनि व्यावसायिक रूपमा हाम्रा पार्टनरहरू द्वारा आपूर्ति गरिन्छ। जुन तपाईंको फरक अनुरोध पूरा गर्न सक्छ।
अघिल्लो: प्लाज्मा र ज्वाला काट्ने सेवा
अर्को: CNC झुकाउने सेवा